Maxay Haweeneyda u Isticmaalaysaa Maaskarada Wejiga?
Gabdhaha qaar waxay dhihi doonaan maqaarkaygu waa caadi, looma baahna waji qurxin, sax? Aynu ku bilowno maqaarka dhintay. Unugyada dhintay iyagu iskama dhacaan, waxay ku urursadaan lakabka ugu dambeeya waxayna noqdaan maqaarka dhintay. ...
Runtii Ma U Baahan Tahay Inaad Iibsato Burushka Nadiifinta Wejiga?
Nadiifinta wajiga badankood waa qalab sonic ah. Gariirka waxaa dhaliya qeybaha qalabka ku jira, gariirkuna wuxuu dhaliyaa hirar dhawaaq ah, madaxa burushka sidoo kale si dhaqso leh ayuu u gariiraa oo leh cabbir yar. Awooddan nadiifinta badanaa waxay ka timaaddaa isku dhaca jirka ...
Sidee loo doortaa burushka qurxinta adiga kugu habboon?
Haddii aad kaliya ku cusub tahay qurxinta, markaa hubaal waad ka murugoon doontaa sida loo doorto burushka qurxinta ee adiga kugu habboon. Marka la eego nalka dhalaalaya ee burushka qurxinta ee suuqa, miyaadan aqoon sida loo bilaabo? Nooca aasaasiga ah: qurxinta caajis b ...